တငျလိုကျတဲ့ ဓာတျပုံလေးတဈပုံကွောငျ့ ပရိတျသတျတှကွေား စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျနတေဲ့ မဦေးရဲ့ခဈြသူ ဟနျလငျး –7Day Daily News
မျောဒယျ ဟနျလငျးနဲ့ မိတျကပျမဦေးတို့ကတော့ အမြားကအားကနြရေတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲလေးလညျး ဖွဈပွီး ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုအသီးအပှငျ့တှေ ပိုငျဆိုငျထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဖွဈပျေါနတေဲ့ နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူပူးပေါငျးပါ ဝငျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့လညျး စဈအာဏာရှငျတှရေဲ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ ဖမျးဝရမျးထုတျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျကတော့ အခြိနျအတျောကွာတဲ့အထိ လှတျမွောကျနယျမွမှော ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနခေဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ လှတျမွောကျနယျမွမှော နထေိုငျစဉျအတှငျး သူ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေိုလညျး ပွညျသူတှေ သိရှိရအောငျ အမွဲဝမြှေပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျက ဟနျလငျးရဲ့ Instagram လူမှုကှနျရကျတှငျ ပုံလေးတဈပုံ တငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ တောထဲမှာ နရေတာအဆငျမပွတေော့တဲ့ အတှကျ ပွညျပနိုငျငံသို့ ရောကျရှိသှားပွီဖွဈကွောငျး ပုံလေးတဈပုံဖွငျ့ သကျသပွေလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဟနျလငျးကလညျး အိမျကို အရမျးလှမျးနတေဲ့အကွောငျး ရငျဖှငျ့ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ မဦေးကို တောထဲမှာထားခဲ့တာလား အတူတူပါလာလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးထားခဲ့ပမေဲ့ ဘာကိုမှ ပွနျလညျဖွကွေားရှငျးမရှိပါဘူးနျော. ပရိသတျကွီးရဲ့ ထငျမွငျခကျြကိုလညျး ရေးသားခဲ့ကွပါအုံးနျော…
မော်ဒယ် ဟန်လင်းနဲ့ မိတ်ကပ်မေဦးတို့ကတော့ အများကအားကျနေရတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲလေးလည်း ဖြစ်ပြီး ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူပူးပေါင်းပါ ဝင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ နေထိုင်စဉ်အတွင်း သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ပြည်သူတွေ သိရှိရအောင် အမြဲဝေမျှပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ဟန်လင်းရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်တွင် ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ တောထဲမှာ နေရတာအဆင်မပြေတော့တဲ့ အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပုံလေးတစ်ပုံဖြင့် သက်သေပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်လင်းကလည်း အိမ်ကို အရမ်းလွမ်းနေတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မေဦးကို တောထဲမှာထားခဲ့တာလား အတူတူပါလာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးထားခဲ့ပေမဲ့ ဘာကိုမှ ပြန်လည်ဖြေကြားရှင်းမရှိပါဘူးနော်. ပရိသတ်ကြီးရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကိုလည်း ရေးသားခဲ့ကြပါအုံးနော်…
သူမခဈြရတဲ့ခဈြသူလေးရဲ့မကျြနှာကို ထုတျမပွခွငျးရဲ့နောကျကှယျက အကွောငျးအရငျးကိုပွောပွလာတဲ့ မွတျသူသူ